ဖွဲ့တည်ရာ အတွဲ (၁) အမှတ် (၆) အတွက် ရွေးချယ်ထားသော စာမူစာရင်း | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ဖွဲ့တည်ရာ အတွဲ (၁) အမှတ် (၆) အတွက် ရွေးချယ်ထားသော စာမူစာရင်း	Posted by mm thinker on January 27, 2009
Posted in: Announcement.	Tagged: Announcement.	ကဗျာ
ငြိမ်းဇေဦး – ငဲ့
လင်းပြာနွေ – ရန်ကုနု
လာရာ – မှတ်တမ်း တဖန်လှန်ခြင်း
ညိမ်းညို – ယာယီခရီး
ကျော်ညိုသွေး – ကော်နက်ရှင် ကောင်းတဲ့နေ့
ရွှန်းမီ – ဆောင်းအိပ်မက် အသစ်
အလွမ်းပြေ – ဘဝ ည
ကိုဂစ်တာ – ချစ်သူအလှဖွဲ့
← His Majestry of Thailand	AboutaCity →	8 comments on “ဖွဲ့တည်ရာ အတွဲ (၁) အမှတ် (၆) အတွက် ရွေးချယ်ထားသော စာမူစာရင်း”
မြင့်မြတ်ကြယ် on January 28, 2009 at 12:08 am said:
ဖွဲ့တည်ရာ မဂ္ဂဇင်းရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ဗဟုသုတများကို ဖွဲ့တည်ရာမှတဆင့် မျှဝေခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းသာပါတယ်။ ဖွဲ့တည်ရာ မဂ္ဂဇင်း ထာဝရ တည်မြဲပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။
အလှတရား on January 28, 2009 at 3:32 am said:
တက်လူ on January 28, 2009 at 9:55 pm said:
ကျနော့် စာမူကို မထင်မှတ်ထားပဲ ရွေးချယ်ခံရသည့်အတွက် ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်ဗျာ။ ပထဦးဆုံးခြေလှမ်းအတွက် မှတ်တမ်းအတင်ခံရတယ်။
အမှတ်(၆)ထွက်ရင် ဖတ်ရဖို့ စောင့်မျှော်နေပါ့မယ်။
ထူးမြတ် on February 6, 2009 at 10:54 pm said:
ကိုသင်ကာ ချုပ်ထားတဲ့ တစ်လ တစ်ပုဒ် စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလား မသိဘူးခမျ။ ၀တ္ထုတို စာရင်းမှာ ကျနော့် နာမည် မပါဘူးဖြစ်နေတယ်။
အဟီး… ကျနော့် ၀တ္ထုတိုတွေ ကွာလတီ ကျသွားလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။🙂
အမှတ် ၆ ကို မျှော်နေမယ်ဗျို့…
လွမ်းသုရင် on February 8, 2009 at 4:42 am said:
အယ်ဒီတာ on February 8, 2009 at 5:35 am said:
မြင့်မြတ်ကြယ် on February 10, 2009 at 11:43 am said:
ဖွဲ့တည်ရာ အထူးထုတ် နာရီပိုင်းအတွင်း ထွက်မည်ဆိုလို့ သိပ်ရင်ခုန်နေပါတယ်။ ဖွဲ့တည်ရာမှ အယ်ဒီတာများရဲ့ အနုပညာ၊ စိတ်ဓာတ်နှင့် စေတနာကို အထူးလေးစားပါတယ်။ လတိုင်းလည်း ထုတ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေပါတယ်နော်….။
ထူးမြတ် on February 10, 2009 at 11:43 am said: